Kedu Elements Ele Kwesịrị Bele na Mgbasa Ozi Email Gị? | Martech Zone
Iji anyị ntinye ntinye n'ime 250ok, Anyị mere ule ọnwa ole na ole gara aga ebe anyị degharịrị isiokwu ahịrị akwụkwọ akụkọ anyị. Nsonaazụ dị ịtụnanya - ntinye igbe igbe anyị abawanye na 20% gafee ndepụta mkpụrụ anyị mepụtara. Nke bụ eziokwu bụ na nnwale email bara uru itinye ego ahụ - yana ọ bụ ngwaọrụ iji nyere gị aka iru ebe ahụ.
Were ya na ị bụ ụlọ nyocha na-elekọta ya ma na ị na-eme atụmatụ ịnwale ọtụtụ kemịkalụ iji wepụta usoro ziri ezi. Ọ dị ka ọrụ na-emenye ụjọ, ọ bụghị ya? Otu bụ akụkọ na ndị na-ere ahịa email! Lụ ọgụ maka anya ndị debanyere aha gị na igbe nnabata ha pụtara na ịchọrọ ichọta ụzọ kachasị mma iji mee ha. Ọ dị oke mkpa iji nwalee akụkụ dị iche iche nke ahịa email gị iji bulie ma mepee ọwa email gị.
Nnwale A / B - na-atụle nsụgharị 2 nke otu agbanwe iji chọpụta nsụgharị nke na-amịpụta nke kachasị emepe, pịa, na / ma ọ bụ mgbanwe. A makwaara dị ka nyocha nkewa.
Nnwale dị iche iche - na-atụle ihe karịrị nsụgharị 2 nke email nwere ọtụtụ ọdịiche dị na gburugburu email ahụ iji chọpụta njikọta nke mgbanwe dị iche iche na-enye ọtụtụ oghere, clicks, na / ma ọ bụ mgbanwe. A makwaara ya dị ka MV ma ọ bụ 1024 Nnwale mgbanwe.
Ihe omuma ihe omuma a sitere na otutu ndi otu ndi mọnk Email na enyere aka ichota ihe di iche na ike nke Nyocha A / B na ule di iche iche dịka o si metụta mkpọsa ozi ịntanetị. Gụnyere usoro ndị iji jikwaa gị email ule mkpọsa, ihe atụ nke otu ị nwere ike isi setịpụ A / B na ule dị iche iche, usoro ndị metụtara iji ruo nkwubi okwu, yana ihe 9 iji nwalee:
Kpọọ ka ị rụọ ọrụ - nha, agba, ntinye na ụda.
Personalization - inweta ahaziri nke ọma dị mkpa!
Nweta Isiokwu - nwalee usoro isiokwu gị maka ntinye igbe, oghere na ọnụego ntụgharị.
Site na Nweta - nwalee dị iche iche n'ịgwa nke ika, n'akwụkwọ, na aha.
Design - gbaa mbọ hụ na ọ dị emeghachi omume na scalable gafee ndị ahịa email niile.
Oge na Daybọchị - Ọ ga - eju gị anya mgbe ndị folks na - emepe ozi ịntanetị gị! Izipu ha ịtụ anya etu ọrụ ha ga - esi abawanye njikọ aka.
Ofdị Onyinye - Ule dị iche iche nke onyinye gị iji hụ nke ndị tọghatara nke kacha mma.
Detuo email - Ifịk ifịk vesos olu na nkenke, ikwenye ederede ga-eme ka a nnukwu ọdịiche gị debanyere aha 'omume.
HTML vesos ederede nkịtị - Ọ bụ ezie na ozi ịntanetị HTML bụ oke iwe niile, a ka nwere ndị na-agụ ederede doro anya. Nye ha ogbugba ma lelee nzaghachi.
Fọdụ mgbakwunye ndị ọzọ na nnwale Email
Ebube - Ntuzi nke Onye Mbido na A / B Ule: Mgbasa Ozi Email Nke Na-agbanwe
Onyeka Onwenu - 6 Email A / B Ule I Nwere Ike Todaygba Taa (Nweta Nsonaazụ)
Tags: ụbọchị kachasị mma iji zipu emailoge kacha mma iji zipu emailkpaliri a / b nyochaịkpọ oku ka ime iheemail ule mkpọsaemail oyiriemail nnwale uleemail ctaemail imeweozi infographicemail mọnkndị mọnk emailemail nyocha ọtụtụemail na-enye uleemail na-enyeemail nkeonweemail na-anabata imeweemail scalable imeweahịrị ederede emailnyocha emailemail oge na ụbọchịemailmonkshtml na ederede
Daalụ maka ịkekọrịta Doug a! Anyị nwere ekele maka nkwado nkwado gị.